बिवाहा बन्धनमा बाँधिदै प्रिज्मा र बले ! बिवाह हुने मिती तय – Khabar Silo
बिवाहा बन्धनमा बाँधिदै प्रिज्मा र बले ! बिवाह हुने मिती तय
Posted on February 7, 2020 Author admin Comment(0)
काठमाडौं। ‘भद्रगोल’ नामक हाँस्य टेलिश्रृंखलाबाट अभिनयमा चिनिएका सागर लम्साल ‘बले’ र टिकटकबाट परिचित भएकी प्रिज्मा खतिवडाबीचको प्रेमसम्बन्धको चर्चाले अहिले बजार तातिरहेको छ ।
हाल ‘सक्किगो नी’ नामक हाँस्यटेलिश्रृंखलामा अभिनय गरिरहेका सागर (बले)ले दर्जनौँ म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् । सोहि क्रममा उनको प्रिज्मासँग भेटघाट भएको थियो । जुम्ल्याहा दिदि–बहिनी प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा अहिले अभिनय क्षेत्रमा चर्चित छन् ।
दर्जनौँ म्यूजिक भिडियो तथा केहि चलचित्रका गीतहरुमा समेत उनिहरुले एकसाथ अभिनय गरेका छन् । सागर र प्रिज्मा मात्र होईन प्रिज्माकी बहिनी प्रिन्सी पनि मञ्जिल बस्नेतसँगको प्रेममा रहेको चर्चा छ । मञ्जिल पनि टिकटकबाट उदाएर हाल म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिरहेका छन् ।
एक बिश्वस्त श्रोतका अनुसार सागर(बले) र प्रिज्माले अर्को बर्ष अर्थात २०७७ मा बिवाह गर्दैछन् । केहि महिना अघिदेखी प्रेममा रहेका उनिहरुको घरपरिवारमा समेत कुराकानी भईसकेको बुझिएको छ ।
अन्य समाचार :अनलाइनबाट आइफोन किन्न खोज्दा यसरी ठगिइन् समीक्षा काठमाडौं। ओखलढुंगाकी समिक्षा पौडेलले फेसबुकमा एउटा विज्ञापन देखिन् । एप्पल स्टोर नामक फेसबुक पेजमा गरिएको उक्त विज्ञापनमा एप्पल कम्पनीका आइफोनहरु निकै सस्तामा पाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
यो नेपालीले नै चलाएको पेज हुन सक्ने समिक्षा बताउछिन् । पेज सञ्चालकहरुले डेलिभरी ब्वाई बताएका एक व्यक्तिले १३०५९४६१७५२ नम्बरबाट अझैपनि कुरा गरिहेका छन् । यो नम्बर अमेरिकाको हो । पछिल्लो समय फेसबुक पेजमा सस्तोमा सामग्री उपलब्ध गराउने बताउँदै ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी छ ।
‘हरेक कुरालाई राजनीतिक चस्माले नहेरौं’
काठमाडौं । कलाकार दीपकराज गिरीले हरेक कुरालाई राजनीतिक चस्माले हेरेर विश्लेषण नगर्न आग्रह गरेका छन् । चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’लाई कम्युनिष्ट विरोधी भन्ने आरोप लागेपछि दीपकले हरेक कुरालाई राजनीतिसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका हुन् । केहीले कम्यूनिष्ट बिरोधी, केहीले कांग्रेसलाई ‘माइनस’ गरेको र केहीले ज्ञानेन्द्र शाहीको ‘लाइन’मा हिँडेको आरोप लगाइएको भन्दै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा […]
Posted on December 28, 2020 Author khabar silo
काठमाडौँ । धाराप्रवाह रुपमा तथ्य सहित बोल्न सक्ने क्षमताका धनी ब्यक्तित्व रमेश प्रसाईको पछिल्लो परिचय हो गायक । रिगंकेबुगंको राँगो गाए लगत्तै विबाह गरेका रमेश अहिले ट्रेण्डिगंमा नै रहेका बेला रमेश र नन्दा धरानबाट काठमाडौँ फर्किएका छन् । रमेश र नन्दाले विबाहपछि आफन्तहरुलाई भेटघाट सकेर काठमाडौँ फर्किए लगत्तै उनीहरु नन्दाले संचालनमा ल्याएको अन्तर दृष्टि आश्रम […]
आलियाको मुख्य भूमिका रहने ‘गंगुबाईमा खेल्न रणवीर मानेनन्
मुम्बई : फिल्म ‘गल्ली ब्वाई’ मा अभिनेत्री आलिया भट्ट र अभिनेता रणवीर सिंहको जोडी थियो । बन्दै गरेको फिल्म ‘तख्त’मा पनि दुवैको जोडी देखिँदै छ । तर आलियाको मुख्य भूमिका रहने ‘गंगुबाई’ फिल्मको अफरलाई भने अभिनेता रणवीरले नकारेका छन् । संजयलीला भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘गंगुबाई’को अफर रणवीरले अस्वीकार गरेका हुन् । समाचारअनुसार फिल्मका लागि निर्देशक […]
एका बिहानै मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्दै तपाइको आजको राशिफल हेर्नुहोस